मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण - Aathikbazarnews.com मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण -
कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बिहीबार स्थिर रहेको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३७२ रहेको छ । यो दिन कम्पनीको शेयर मूल्य रु. ३८० सम्म पुगेको थियो ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ४ करोड ५२ लाख ७३ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रु. ५ करोड २३ लाख ३४ हजार नाफा कमाएको थियो । नाफामा गत आवको त्ुलनामा चालू आवमा १८ प्रतिशतले कमी आएको हो ।नाफामा कमी आएसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि कमी आएको छ ।
गत आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. ६ दशमलव ६५ रहेकामा चालू आवको सोही अवधिमा रु. ५ दशमलव १० मा सीमित भएको हो ।